FBမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ ဖင် ဂါထာ လေး လိုက်ဆို ရအောင်…. – Alanzayar
FBမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ ဖင် ဂါထာ လေး လိုက်ဆို ရအောင်….
ဖင် အကြောင်း ပြောရင် ရိုင်းတယ်လို့ ထင်ကြတယ်။ တချို့က ဖင် လို့ ပြောရင် မကြိုက်ဘူး။ တင်ပါး လို့ ခေါ်စေ ချင်တာ။ မတူဘူး။ တင်ပါး ဆိုတာ အပေါ်က ပြောင်ပြောင် တင်းတင်း အပျို ပါးလေး လို ဖောင်းဖောင်း အိအိ ဖြစ်နေတဲ့ နေရာလေးပဲ ခေါ်တာ။
ဖင် ဆိုတာကျ အရိုးရော၊ အဆစ်ရော၊ အသားရော၊ တပြုံလုံး အကုန်လုံးကို ခေါ်တာ။ ဒါကြောင့် ဖင်လို့သာ ဆက်၍ ခေါ်မည် ခိုင်။ ဘာကိစ္စ ဖင် ကို ဗာရာဏသီ ချဲ့နေ သလဲ မေးစရာ ရှိတယ်။ ဖင် ဆိုတာ အရင် ကတော့ သိုသို သိပ်သိပ် ကွယ်ကွယ် ဝှက်ဝှက်ပဲ ကြည့်ရတဲ့ နေရာ။
အခုများ ဟုတ်ဘူးဗျ၊ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ အောင်မြင်ရေး ကျင့်စဉ်ကြီး ဖြစ်နေတယ်။ တခြား မကြည့်နဲ့။ လုလုအောင်ကို ကြည့်။ သူ့ဘာသာ ပုံလေး လှအောင် ဖင် နေရာ လေးကို ဖိုတို ချော့လေးနဲ့ ပြင်လိုက် ပါတယ်။
ဟမ်မာလေး သံတိုင် ကွေး ပါတယ် ဆိုပြီး မိန်းမ တွေ ဝိုင်း ဖောင်းထု လို့ နာမည်ကြီး သွားတာ အခုဆို ပုရိသတွေ လုမှ လုနေ ကြပြီ။ ဟော စုလှိုင်ဝင်း ဆိုတဲ့ ကလေးမလေး၊ သူတတ်တဲ့ ပညာ နဲ့ ကနေရင် ဘယ်သူမှ လူ မသိဘူး။ ဖင်လေး လှုပ်ပြီး လမ်းလျှောက် လိုက်မှ နာမည် ကြီးသွားတာ။
နောက် ခြူးစင်ဟန်တို့၊ ခင်ဆုရည်တို့လည်း ဖင်တိုက်ပွဲ ထဲ ဖင်စုံပစ် ဝင်လာကြ တော့တာ။ ဒါကြောင့် ဖင် ဆိုတာ အောင်မြင်ရေး လျှို့ဝှက်ချက် လို့ မှတ်ပါ ပရိတ်သတ်။
Flower တက်မည်မှတ် (ဖလူဝါ တက်မည်မှတ်)
FBမှာ ခတျေစားနတေဲ့ ဖငျ ဂါထာ လေး လိုကျဆို ရအောငျ….
ဖငျ အကွောငျး ပွောရငျ ရိုငျးတယျလို့ ထငျကွတယျ။ တခြို့က ဖငျ လို့ ပွောရငျ မကွိုကျဘူး။ တငျပါး လို့ ချေါစေ ခငျြတာ။ မတူဘူး။ တငျပါး ဆိုတာ အပျေါက ပွောငျပွောငျ တငျးတငျး အပြို ပါးလေး လို ဖောငျးဖောငျး အိအိ ဖွဈနတေဲ့ နရောလေးပဲ ချေါတာ။
ဖငျ ဆိုတာကြ အရိုးရော၊ အဆဈရော၊ အသားရော၊ တပွုံလုံး အကုနျလုံးကို ချေါတာ။ ဒါကွောငျ့ ဖငျလို့သာ ဆကျ၍ ချေါမညျ ခိုငျ။ ဘာကိစ်စ ဖငျ ကို ဗာရာဏသီ ခြဲ့နေ သလဲ မေးစရာ ရှိတယျ။ ဖငျ ဆိုတာ အရငျ ကတော့ သိုသို သိပျသိပျ ကှယျကှယျ ဝှကျဝှကျပဲ ကွညျ့ရတဲ့ နရော။
အခုမြား ဟုတျဘူးဗြ၊ ဖစျေ့ဘုတျမှာ အောငျမွငျရေး ကငျြ့စဉျကွီး ဖွဈနတေယျ။ တခွား မကွညျ့နဲ့။ လုလုအောငျကို ကွညျ့။ သူ့ဘာသာ ပုံလေး လှအောငျ ဖငျ နရော လေးကို ဖိုတို ခြော့လေးနဲ့ ပွငျလိုကျ ပါတယျ။
ဟမျမာလေး သံတိုငျ ကှေး ပါတယျ ဆိုပွီး မိနျးမ တှေ ဝိုငျး ဖောငျးထု လို့ နာမညျကွီး သှားတာ အခုဆို ပုရိသတှေ လုမှ လုနေ ကွပွီ။ ဟော စုလှိုငျဝငျး ဆိုတဲ့ ကလေးမလေး၊ သူတတျတဲ့ ပညာ နဲ့ ကနရေငျ ဘယျသူမှ လူ မသိဘူး။ ဖငျလေး လှုပျပွီး လမျးလြှောကျ လိုကျမှ နာမညျ ကွီးသှားတာ။
နောကျ ခွူးစငျဟနျတို့၊ ခငျဆုရညျတို့လညျး ဖငျတိုကျပှဲ ထဲ ဖငျစုံပဈ ဝငျလာကွ တော့တာ။ ဒါကွောငျ့ ဖငျ ဆိုတာ အောငျမွငျရေး လြှို့ဝှကျခကျြ လို့ မှတျပါ ပရိတျသတျ။
Flower တကျမညျမှတျ (ဖလူဝါ တကျမညျမှတျ)
Previous Article လမ်းနဲ့မလွတ်လို့ဆိုပြီး ရပ်ထားတဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေကို အကြမ်းဖက်စစ်ကားဝင်တိုက်ဖျက်ဆီး
Next Article စစ်ကိုင်းတိုင်းအ တွင်း မြို့န ယ် တချို့တွင် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းလိုင်းများစကစ ယုတ်မာနေပြီး…0